Media sy Fanoratan-gazety · Septambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Septambra, 2011
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Septambra, 2011
Eoropa Afovoany & Atsinanana 20 Septambra 2011
Nahazo sazy mihantona ireo rehetra fantatra fa nandray anjara tamin'ny herisetra nandritra ny adim-poko tamin'ny volana febroary 2011, tao amin'ny lapa-manda tao Skopje (Kale), nandritra ny fitsarana natao an-tsokosoko. Tanora sy vatombatony an-jatony maro no nandray anjara tamin'ny fifandonana, nialohavan'ny alina namotehan'ny mpiasam-panjakana ambony ao amin'ny foko Albaniana ny fiangonana...
Rosia : Sigara Natao Ho An'ny Vehivavy Tanora Nahatonga Fifandirana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 08 Septambra 2011
Dokambarotra iray vao tsy ela izay sy fonosana navaozin'ilay orinasa mpanao sigara isan'ny matanjaka ao Rosia no nahasosotra ny bilaogera Rosiana ka nahatonga adihevitra teo amin'ny andraikitra ara-barotra sy ny dokambarotra. Nanaraka akaiky ilay raharaha i Ashley Cleek .
Myanmar: Sarintanin'ny Fonja Iaraha-manoro
Azia Atsinanana 04 Septambra 2011
Nisy Sarintanin'ny Fonja Iaraha-manoro ao Myanmar natsangana ho fanohanana ny hetsika fanafahana ny mpanao gazetin-dahatsary ‘Free Burma’. Ny sarintany dia mijery sy manome fampahafantarana fohy momba ny fonja 43 ao Myanmar. Mpanao gazetin-dahatsarin'ny Democratic Voice of Burma miisa 17 no voatazona ankehitriny.
Amerika Latina 03 Septambra 2011
Ny famintinanay farany ny 'Fetiben'ny Bilaogy: Meksika- Vahoaka, Herisetra ary Bilaogy', dia mifantoka amin'ny fiheveran'ireo bilaogera mikasika ny vahaolana aroson'ny governemanta sy ny vahoaka mba ho ezaka amin'ny fampiatoana ity resaka herisetra ity